DialogTech: Wicitaanka Wicitaanka iyo Falanqaynta Beddelka | Martech Zone
Arbacada, Maarso 30, 2016 Arbacada, Maarso 30, 2016 Douglas Karr
Ka hor taleefannada casriga ah iyo aaladaha gacanta, markii suuq-geynta dijital ahi uu ahaa boqolkiiba 100 desktop-ka, ku xirnaashaha ayaa ka fudud. Macaamiil ayaa gujiyay xayeysiiska shirkadda ama emaylka, wuxuu booqday bogga degitaanka, wuxuuna buuxiyey foom si uu u noqdo hoggaamiye ama u dhammaystiro iibsiga.
Suuqleyda ayaa ku xiri kara hogaaminta ama iibsiga isha suuq geynta saxda ah waxayna si sax ah u cabiraan soo celinta qarashka olole kasta iyo kanaal kasta. Waxay si fudud ugu baahnaayeen inay dib u eegaan taabashada oo dhan si loo ogaado qiimaha kanaalka kasta, waxayna ku wanaajin karaan saameynta ay ku leeyihiin dakhliga iyaga oo maalgashi ku sameynaya waxa shaqeynaya kana takhalusaya wixii aan aheyn. CMO sidoo kale waxay si kalsooni leh ugu difaaci kartaa miisaaniyadooda agaasimaha guud iyadoo cadeynaysa saameynta ay ku leedahay dakhliga.
Laakiin adduunka maanta ugu horreeya ee moobiilka ee macaamiisha iyo macaamiil badani ay u beddelaan wicitaan, u-sheegashadu waa caqabad badan - ma aha oo kaliya go'aaminta ilaha wicitaanka, laakiin natiijada ka dhalata sidoo kale. Balaayiinadan wicitaanada taleefanka billaha ah waxay ku dhacaan banaanka aragtida aaladaha suuqgeynta badankood, iyagoo abuuraya dalool madow oo weyn oo ku saabsan suuq geynta xogta suuq geynta suuqyada waxay kuxirantahay cadeynta ROI iyo hagaajinta dakhliga. Xogtan ku saabsan beddelaadda wicitaanku weligiis wuu lumayaa. Xogtaan waxaa ka mid noqon kara:
Suuq-geynta wicitaanka: Waa maxay kanaalka mobilada, dhijitaalka ah, ama qad la'aanta ah ee wicitaanka wadey - oo ay ku jiraan xayeysiiska, ololaha, iyo raadinta erayga muhiimka ah - iyo bogag kasta iyo waxyaabaha ku jira boggaaga qofka soo wacaya ayaa daawaday ka hor iyo ka dib wicitaanka.
Xogta wacaha: Waa kuma qofka soo wacaya, lambarka taleefankooda, juqraafi ahaan halka uu ku yaal, maalinta iyo saacadda la soo wacayo, iyo in ka badan.
Nooca wicitaanka: Muxuu ahaa ujeedka soo-wacaha - ma wuxuu ahaa wicitaan iib ama nooc kale (taageero, HR, codsi, khalad xumo, iwm)?
Wac natiijada iyo qiimaha: Meeshii wicitaanku socday, intee in le'eg ayuu sheekadu socday, maxaa lagu yiri wicitaanka, iyo haddii wicitaanku u beddelay fursad iib ama dakhli (iyo cabirka ama qiimaha fursadda).
Qeybinta wicitaannada taleefanka ayaa ah caqabadda ugu culus ee soo food saartay suuqleyda xogta ku kexeysa maanta. La'aanteed, suuqleyyaashu si sax ah uma cabbiri karaan suuqgeynta 'ROI' isla markaana waxay ku wanaajin karaan kharashka waxa dhab ahaan wadista u horseedaya iyo dakhliga. Intaa waxaa sii dheer, suuqleydu ma awoodaan inay si kalsooni leh ugu difaacaan miisaaniyadaha agaasimaha guud. Marka la soo koobo, godka madow wuxuu gelinayaa kooxaha suuq geynta cadaadis saaid ah si ay u difaacaan qiimahooda isla markaana ay ugu kacaan macaamiisha ganacsiyada.
Wicitaanada taleefannada ee soo galaya ayaa ka mid ah tilmaamayaasha ugu adag ee iibsashada safar kasta oo macaamiil ah. DialogTech wuxuu awood u siinayaa kooxaha suuq geynta shirkadaha iyo wakaaladaha inay hagaajiyaan ololeyaasha dhijitaalka ah ee wicitaanada macaamiisha iyagoo adeegsanaya isla xalalka martech iyo geedi socodka ay horeba ugu isticmaaleen qasabadaha. ” - Irv Shapiro, agaasimaha guud, WadahadalTech
WadahadalTech waxay u adeegtaa sidii lammaane istiraatiiji ah in ka badan 5,000 shirkado, hay'ado, iyo shirkado si dhakhso leh u koraya oo ku baahsan noocyo kala duwan oo warshado ah. Macaamiisha hadda waxaa ka mid ah Ben & Jerry's, HomeFinder.com, Comfort Keepers, Terminix, oo leh seddex kiis oo adeegsi qasab ah Warbaahinta F5, HoteeladaCorp, Iyo Xarumaha Joodariga ee Tareenka Hurdada.
Iyagoo adeegsanaya raadinta wicitaan wax ku ool ah oo leh astaamo iyo raadinta beddelaad, suuqleydu waxay hagaajin karaan AdWords iyo ololaha raadinta Bing si ay u wadaan wicitaanno badan oo keliya, laakiin macaamiil badan iyo dakhli:
Adeegso Raadinta Wicitaanka Heerka-Heerka si loo caddeeyo loona hagaajiyo ROI: Si sax ah u faham sida ololahaaga raadinta ee lacag bixinta ahi u wicitaanada wicitaanada, ka dibna u hagaajiyaan ereyada muhiimka ah, xayeysiinta, bogagga degitaanka, goobaha, iyo maalmaha / jeer ee wada wicitaanada macaamiisha ugu badan (uguna wanaagsan).
Wicitaanada Jidka Ku saleysan Xogta Raadinta Wicitaanka: U adeegso xogta raadraaca wicitaanka ee la qabtay waqtiga wicitaanka si aad ugu dirto wicitaan kasta si wanaagsan, adoo u keenaya qofka ugu fiican ee u beddelaya iib. Wicitaanka tiknoolajiyada wicitaanku waxay marin kartaa wicitaanada waqtiga dhabta ah iyada oo ku saleysan fursado badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan ilaha suuq geynta (ereyada muhiimka ah, xayeysiiska, iyo bogga soo degitaanka), waqtiga iyo maalinta, goobta qofka soo wacaya, iyo in ka badan.
Falanqeeyaan Wadahadalka si loo hagaajiyo PPC: Adeegso wada hadal Analytics teknolojiyad si loo arko haddii soo wacayaasha lacag bixinta ay isticmaaleen dabadaada dheer ama ereyo kale oo muhiim ah, sida ay u sharaxaan dhibcaha xanuunka iyo xalalka ay xiiseynayaan, iyo inbadan. Waxaad u adeegsan kartaa aqoontaas si aad u ballaadhiso ama u hagaajiso-u-habeynta bartilmaameedka ereyga oo aad uga dhigto xayeysiiska iyo degitaanka bogga fariin wax ku ool ah.
Barxadda DialogTech waxay xallineysaa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag ee maanta ka jira moobilka-koowaad adduunka iyadoo laga takhalusayo daloolka madow ee xogta waxqabadka suuqgeynta wicitaannada soo gala. Maaddaama suuqleyda ay la kulmayaan cadaadis sii kordhaya si ay u wadaan ma aha oo kaliya hoggaaminta laakiin dakhliga, barnaamijka DialogTech wuxuu awood u siiyaa suuqleyda xogta tilmaanta wicitaanka ee loogu baahan yahay inay si kalsooni leh u maal gashadaan ololeyaasha wicitaannada wacaya, iyo sidoo kale tikniyoolajiyadda beddelka ee lagama maarmaanka u ah in dadka macaamiisha ah loogu beddelo. Waa u yeerista wicitaanka iyo tiknoolajiyada beddelaadda oo si gaar ah loogu dhisay suuqleyda ka shaqeeya wicitaannada goob kasta oo loo isticmaali karo - ama gebi ahaanba ka madax bannaan - xarunta wicitaanka ganacsiga.
DialogTech wuxuu bixiyaa:
Xogta udhaxeysa dhamaadka-dhamaadka-wicitaanka: Wax badan oo ka badan raadinta wicitaanka. Xalka kaliya ee u sheegaya suuqleyda sida ololahoodu u wacayo wicitaanada macaamiisha, haddii wicitaanadu u beddelaan iibka, iyo sababta - xiridda wareegga u dhexeeya dollarka lagu qaatay iyo dollarka la kasbaday.
Tikniyoolajiyadda beddelka wicitaanka waqtiga-dhabta ah: Xalka kaliya ee suuqleyda ay ku xakameynayaan wadada isla markaana ay shakhsiyeeyaan khibrad kasta oo wicitaan waqtiga dhabta ah, iyagoo hubinaya in soo waca kasta uu ku xiran yahay isla markiiba qofka ugu fiican ee u badalaya iib.
DialogTech markii ugu dambeysay la bilaabay XigashoTrak ™ 3.0 - xalka ugu horeeya ee kaliya ee raadinta xalka raadinta ee loogu talagalay in lagu daboolo xogta, awooda, kalsoonida iyo sahlanaanta fulinta shuruudaha shirkadaha Fortune 1000, ururo badan oo meelo badan leh iyo wakaaladaha suuq geynta ee ay la shaqeeyaan.
Marka lagu daro SourceTrak 3.0, DialogTech waxay soo saartay xalalka soo socda ee 2015, iyadoo sii xoojinaysa Voice360® Muuqaal:
SpamSentry ™ Ka Hortagga Wicitaanka Spam: Xalka kaliya ee wicitaanka raadinta wicitaanka ee adeegsada la-qabsiga, tikniyoolajiyada barashada mashiinka ee joojiya khiyaanooyinka iyo wicitaanada aan loo baahnayn kahor intaanay gaarin kooxda iibka ee shirkadda. SpamSentry sidoo kale waxay ka hortagtaa xogta wicitaanka spam inay ka muuqato Analytics in suuqleyda ay ku tiirsan yihiin inay cabbiraan waxqabadka ololayaasha suuqgeynta moobiilka. Astaamaha muhiimka ah waxaa ka mid ah: shabakadaha neerfaha ee Artificial, oo la jaan qaadi kara spam cusub, iyo teknolojiyadda keypress. Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso:
DialogTech ee Suuqgeynta Mobilka: Xalka suuq geynta ugu horeysa iyo tan dhameystiran ee dabagalka, xakamaynta, iyo wanaajinta wicitaanka macaamiisha ee xayeysiinta moobiilka. Xalkani wuxuu sidoo kale siinayaa suuqleyda kuwa ugu saxsan heerka u dhiganta heerka wicitaanka xogta kordhinta wicitaanka Google. La socoshada wicitaanka wicitaanka, awoodaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah: Jadwalka wicitaanka guud, Wadahadalka Aragtida duubista wicitaanka iyo Analytics, iyo iskudhafka si loogu daro wicitaan gaar ah oo ololeeye ah Analytics xogta leh martech iyo codsiyada adtech si loo hagaajiyo waxqabadka ololaha.
LeadFlow ™ ee Lacag-Bixin-Wicitaan: Habka wicitaanka ugu horumarsan, sifeynta, iyo xalka maaraynta ee loogu talagalay ololeyaasha lacag-wicitaan-wicitaan. Socodka Lead waxay siinaysaa gacansaarista iyo waxqabadka suuqleyda si buuxda gacanta ugu haynta halka taleefannada laga diro kanaal kasta oo suuq geynaya, kaas oo wicitaanada loo tiriyo inay yihiin hogaamin sax ah, iyo inbadan oo dheeri ah.
Tags: wac falanqayntasifo u yeeranbeddelka wacnatiijada soo wacqiimaha wacxogta soo wacahagorfaynta beddelkawada hadalkaisha wicitaanka ee wicitaankanooca wicitaanka